လူမှုမီဒီယာပညာရှင်များသည်အမှန်တရားကိုမဖြေရှင်းနိုင်ပါ Martech Zone
ငါမကြာသေးမီကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုလုပ်နေတယ်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်က ၁၀၀% ဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ကြည်လင်သော ကျွန်ုပ်၏နိုင်ငံရေး၊ ၀ ိညာဉ်ရေးရာနှင့်အခြားယုံကြည်မှုများအကြောင်းပါရှိသည် ငါ့ Facebook စာမျက်နှာ။ ဒါကစမ်းသပ်မှုမဟုတ်ခဲ့…အဲဒါကကိုယ့်ဟာကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖြစ်ခွင့်ရတာပဲ။ ကျနော့်အမြင်ကတော့သူတစ်ပါးကိုမငြိတွယ်စေဘူး၊ ဒါဟာအမှန်တကယ်ပွင့်လင်းဖြစ်ရိုးရှင်းစွာဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာကျွမ်းကျင်သူတွေကငါတို့ကိုဆက်ပြီးပြောနေတာလား။ သူတို့ကဆက်ပြောသည်မှာဆိုရှယ်မီဒီယာသည်ဤမယုံနိုင်စရာအခွင့်အလမ်းကိုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးဖြစ်ရန်အခွင့်အရေးပေးသည် ကြည်လင်သော.
အကြှနျုပျ၏စမ်းသပ်မှုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာစတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ Facebook စာမျက်နှာတွင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာရေးသားချက်များကိုတင်ထားတာကိုရပ်လိုက်ပြီးအခြားသူများကသူတို့စာမျက်နှာများပေါ်တက်လာသည့်အခါထိုအကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးရန်တွန့်ဆုတ်နေခဲ့သည်။ ဒါကမသိပေမယ့်ဒီစမ်းသပ်မှုကကျွန်တော့်ကိုကောက်ချက်သုံးချောင်းပေးစေခဲ့တယ်။
ငါပိုပိုလူကြိုက်များတယ် ပါးစပ်ပိတ်ထား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်မြင်ချက်မထားပါနဲ့ မှန်ပါတယ်၊ လူတွေဟာကျွန်တော့်ကိုမသိချင်ယောင်ဆောင်ချင်ကြတာပါပဲ။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများ၊ ကျွန်ုပ်မိသားစု၊ အခြားကုမ္ပဏီများ၊ အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များ - အားလုံးပါဝင်သည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ပို့စ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနည်းလေလေဖြစ်သည်။ အံ့သြစရာမဟုတ်ပါဘာကြောင့်ကြောင်ဗီဒီယိုများအင်တာနက်ကိုအဘယ်ကြောင့်အုပ်ချုပ်သည်။
အများစုကလူမှုမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုမရှိ ၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝများ၊ ပြ,နာများ၊ ယုံကြည်မှုများနှင့်အငြင်းပွားဖွယ်ရာပြသနာများကိုအွန်လိုင်းသို့။ ငါ့ကိုမယုံဘူးလား သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောလူမှုမီဒီယာဂုရု၏ကိုယ်ပိုင် Facebook စာမျက်နှာသို့ သွား၍ အငြင်းပွားဖွယ်ရာအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေပါ။ အများသုံး bandwagons တွေကိုခုန်တာကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး၊ သူတို့မကြာခဏလုပ်လေ့ရှိတယ်၊ ငါကပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုဆန့်ကျင်တဲ့သဘောထားကိုဆိုလိုတာ။
အများစုကလူမှုမီဒီယာအတိုင်ပင်ခံ လေးစားဖွယ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမထီမဲ့မြင်ပြု။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်စာအုပ်တစ်အုပ်ရေးသားခဲ့သူသို့မဟုတ်အကြိုက်ဆုံးဆိုရှယ်မီဒီယာကျွမ်းကျင်သူနောက်တစ်ကြိမ်တွင် bandwagon တွင်သင်ခုန်။ သင်သဘောမတူပါကသူတို့၏ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာတွင်ဖော်ပြပါ။ သူတို့ကမုန်းတယ် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော့်ကို ၃ ကြိမ်ထက်မနည်းမေးခဲ့တယ် သူတို့ရဲ့စာမျက်နှာကိုချွတ်ရ နှင့်အခြားတစ်နေရာရာမှာငါ့အမြင်ယူပါ။ ငါနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ယုံကြည်ချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့တခြားသူတွေကငါ့ကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ဘူး
ငါ့ကိုမှားအောင်မလုပ်နဲ့ ငါအငြင်းအခုန်ကြီးတစ်ခုကိုကြိုက်တယ်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာများအပေါ်မကြာခဏမှီခိုနေစဉ်တစ်လမ်းတည်း၌သာအမှီပြုလေ့ရှိသည်။ သဘောမတူတဲ့သူတွေကိုငါသဘောမတူဘူး - ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်တွေကိုရိုးရိုးသားသားနဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိဖို့ကြိုးစားနေတာပါ။ ထိုအခါငါ sarcasm တွန့်ဆုတ်ကြဘူးပေမယ့်တကယ်တော့နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောဆက်လက်တည်ရှိဖို့အတတျနိုငျဆုံးလုပ်ပါ။
သင်အွန်လိုင်းနှင့်မီဒီယာများတွင်မကြာခဏကြားရလေ့ရှိသည်၊ ကျနော်တို့ရိုးသားစကားပြောဆိုမှုလိုအပ်ပါတယ်။ Bogus …လူအများစုကရိုးသားမှုကိုမလိုချင်ဘူး၊ သူတို့ကမင်းကိုသဘောကျတယ်၊ မင်းရဲ့အသစ်အဆန်းတွေကိုဝေမျှမယ်၊ သူတို့ကမင်းကိုသဘောတူတယ်ဆိုတာသူတို့သိတဲ့အခါသူတို့ဆီကသင်ဝယ်မယ် ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားမှာ -
ကျွန်ုပ်သည်အဓိကကျသောစကားပြောသူတစ် ဦး ကိုအမျိုးသားရေးပွဲ၌ကျွန်ုပ်ကိုလာနှုတ်ဆက်သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင်အွန်လိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်ရပ်တည်ချက်ကိုသူနှစ်သက်ကြောင်းပြောခဲ့သည်။ သူကလူသိရှင်ကြားမပြောနိုင်ပါ။ သူကကျွန်တော့်နောက်ကိုလိုက်ပေမယ့် Facebook စာမျက်နှာမှာကျွန်တော်ဝေဖန်ခဲ့ဖူးတဲ့ထင်မြင်ချက် (သို့) ဆောင်းပါးတစ်ခုကိုသူဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူး။ ကျွန်တော်သူ့စကားလုံးများကိုသူ၏ပါးစပ်ထဲမထည့်ချင်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်တော့သူကသူ့အွန်လိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးအတုဟာလူလတ်တန်းစားကိုသေချာစေရန်သေသေချာချာထွင်းဖောက်ထားတယ်၊
ဒါကြောင့်ငါမကူညီပေမယ့်တွေးမိ။ ဒီလူတွေကလူကြိုက်များဖို့သာရိုးရှင်းစွာဖန်တီးပြီးအွန်လိုင်းအမှန်တရားဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်နေသလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာမဟာဗျူဟာများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြန့်ဝေသည်နှင့်အမျှ၎င်းသည်မကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်သည် လူကြိုက်များ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုဘယ်တော့မှမရှိဘူး ကတုန်လှုပ်ချောက်ချား.
ဒီနေရာမှာသင့်အတွက်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ရိုးသားမှုအချို့ - ဆိုရှယ်မီဒီယာကျွမ်းကျင်သူအများစုသည်လိမ်လည်သူများဖြစ်ပြီး ၀ န်ခံသင့်သည်။ သူတို့ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသူတို့၏ BS အကြံဥာဏ်ကိုလွှင့်ပစ်သင့်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်လက်လှမ်းမီမှုနှင့်လက်ခံမှုကိုတိုးမြှင့်လိုပါကအငြင်းပွားမှုများကိုရှောင်ရှားသင့်သည်။ တနည်းအားဖြင့် - သူတို့ရဲ့ ဦး ဆောင်လမ်းပြခြင်းနှင့်မုသားလိုက်နာပါ။
ပိုး - Data နှင့် Spreadsheets များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသော Visualizations သို့ပြောင်းပါ
19:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 31
ထိုက်သင့်တာကိုပြောရရင်မင်းရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို online ငါကြိုက်တယ်။ ၎င်းသည်လန်းဆန်းစေပြီးလေးစားစွာဆွေးနွေးငြင်းခုံလိုသည့်သင့်ဆန္ဒကိုနားလည်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ကောင်းစွာသိသည်ဟုထင်လိုသည်။ ငါအွန်လိုင်းနှင့် off ရိုးသားသူတွေကိုကြိုက်တယ်။ ငါကိုယ်တိုင်ဆက်လုပ်ဖို့သင့်ကိုအားပေးပါတယ်
19:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 51
ငါကလူမှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူမဟုတ်ပေမယ့်လူအချို့ကငါ့ကိုသေတ္တာထဲထည့်ချင်ကြတယ်။ ငါသာသိချင်တယ်၊ ငါ့ကိုငါ့ကိုအမှန်တရားကိုမကိုင်တွယ်နိုင်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးငြင်းခုံမှုတွေကိုနှစ်သက်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုရှောင်ရှားသလား။
19:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 17
အတော်လေးဆန့်ကျင်ဘက် Shel ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကွဲပြားမှုမှတဆင့်အမြဲတမ်းလေးစားမှုရှိသောဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားပါတယ် ငါသည်သင်တို့ကိုအလွန်ရိုသေသောကြောင့်!
19:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 31
OKg Doug ငါရပ်တည်ချက်၏သဘောသဘာဝနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအခြေအနေပေါ် မူတည်၍ သင်သဘောမတူပါဟုပြောလိမ့်မည်။
အကယ်၍ အငြင်းပွားမှုသို့မဟုတ်ရပ်တည်ချက်သည်စီးပွားရေးနယ်ပယ်တွင်၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၊ လူမှုမီဒီယာစသည်တို့နှင့်သက်ဆိုင်လျှင်၊ တစ်စုံတစ် ဦး ကအငြင်းပွားသောအခါသဘောမတူသို့မဟုတ်သဘောမတူပါက၎င်းသည်စစ်မှန်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
စီးပွားရေးအငြင်းပွားမှုများတွင်မဟုတ်ဘဲဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတန်ဖိုးများအပေါ်အငြင်းပွားမှုနှင့်၎င်းသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေမည်ဆိုလျှင်၎င်းတို့သည်မှားယွင်းသောပုဂ္ဂိုလ်များကိုအတုအယောင်အဖြစ်ခံနေရသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ မတူညီသောဆွေးနွေးမှုများအတွက်အချိန်နှင့်နေရာရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ခံစားမိသည်။
ကျနော့်မေးခွန်းကသင်ဒီဟာကိုဒေါသထွက်သလား၊ စာဖတ်သူများကိုပိုပြီးမှန်ကန်မှုရှိအောင်ကျယ်ပြန့်တဲ့ပန်းချီကားနဲ့ရေးဆွဲခြင်းလား။ ငါဆင်ခြင်တုံတရားရှိဖို့ကြိုးစားတယ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ပို့စ်တွေနဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေမှာ hyperbole ကိုရှောင်ပြီးသူတို့ဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုပြည့်ဝတဲ့“ sarcasm on skimping” ပို့စ်များလောက်အရေးမပါ။ ငါဆိုရှယ်မီဒီယာဂုရုမဟုတ်ဘူး။
19:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 40
ကောင်းပြီ၊ ပို့စ်တစ်ခု၏ရှုပ်ထွေးမှု၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတည်းဖြတ်ရန်အခွင့်အရေးမရခဲ့မီတင်သွင်းခဲ့သည်။ ငါပြောခဲ့သည့်အတိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာဂုရုမဟုတ် (အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းမှတင်သောပို့စ်များကိုမည်သို့တည်းဖြတ်ရမည်ကိုသိရှိခြင်းနှင့်ပတ်သက်လျှင်…)
ကျွန်တော့်အချက်က sarcasm နဲ့ emotion ကပြန်ကြားချက်တွေရပေမယ့်အမြဲတမ်းမသင့်တော်ဘူး၊
19:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 47
ကျနော့်အမြင်ကတော့တော်တော်လေးကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုအကြံဥာဏ်ပေးတဲ့ပညာရှင်အများစုဟာသူတို့ရဲ့အကြံဥာဏ်ကိုတောင်မလိုက်နာကြဘူးဆိုတာပါ။ သူတို့ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်းမရှိလျှင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ဆက်သွယ်မှုသည်ထိရောက်မှုမရှိပါ။ IMO၊ အွန်လိုင်းပေါ်မှာပြissuesနာတွေအများကြီးရှိတာကလူတွေကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုမပြောတတ်တာ၊ ရိုးသားတဲ့စကားပြောဆိုမှုသို့မဟုတ်ခြားနားသောထင်မြင်ချက်ရှိသူများကိုလေးစားရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ရှိသူများသည်သည်းမခံခြင်း။ တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုလျှင်၎င်းသည်ကုမ္ပဏီများအား၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့်ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ရန်ကူညီခြင်းမဟုတ်ပါ - သို့မဟုတ်အပြန်အလှန်အားဖြင့်။
19:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 59
လူအချို့ကိုသင်ပိတ်လိုက်သောအခါလူအချို့ကိုသင်ဖွင့်လိုက်သည်။ သငျသညျ Doug လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ပြောပါ (သင်လိမ့်မည်ဟုငါသိ၏) ။ သေချာတာပေါ့အဲဒီမှာအစစ်တွေအကြောင်းကိုလျှံလျှို့ဝှက်သောလူတန်းစား၏ oodles ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမှန်တရားကိုသရုပ်ပြလမ်းအလယ်၌အချည်းနှီးဖြစ်၏, ဒါကြောင့်သင်ကကြေညာခဲ့သည်ဝမ်းသာပါတယ်။
ဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေပါစေမင်းနိုင်ငံရေးထဲဝင်ရင်လူတွေကိုစိတ်ဆိုးမှာပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီးလုပ်ပါ ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုကိုဒီမိုကရေစီဖော်ဆောင်ရန်အထောက်အကူဖြစ်မည်လော။
19:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 15
ငါ Barry ထင်တယ် သို့သော်များစွာသောသူတို့သည်သူတို့၏ယုံကြည်ချက်များကိုမျှဝေရန်တွန့်ဆုတ်နေကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ကျနော့်အမြင်မှာအရမ်းဆိုးတယ်
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 52
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 46
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 56
ဒါက Doug ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုEmကရာဇ်မင်း၌အဝတ်အစားမရှိဟုဆိုခြင်းသည်စစ်မှန်သောပွင့်လင်းမြင်သာမှု၏ရှားပါးသောဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့်ကျနော့်အမြင်ကတော့“ ဆိုရှယ်မီဒီယာအတိုင်ပင်ခံ” တွေကိုဝေဖန်မှုတွေအတွက်ရွေးချယ်ရတာကျဉ်းလွန်းလွန်းတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာအပယ်ခံဖြစ်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြားပုန်ကန်မှုအရှိဆုံးအားလုံးမှဝေမျှခြင်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 42
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 57
ငါဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့တယ်ဆိုတာငါ LinkedIn နဲ့ Facebook ပေါ်မှာစီးပွားရေးကိုဆက်လုပ်လေ့ရှိတယ်။ တွစ်တာနှစ်ခုစလုံး၏အလင်းရောနှောရရှိသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ် Facebook မှသူငယ်ချင်းတောင်းဆိုချက်များကိုကျွန်ုပ် ပို၍ ရွေးချယ်သည်။ သူတို့ကိုကျွန်ုပ်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရသိစေချင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်များကိုအံ့အားသင့်ခြင်းမရှိကြခြင်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည်လေးစားဖွယ်ဆွေးနွေးမှုသို့မဟုတ်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများကိုနှစ်သက်ကြောင်းသိကြသည်။
ဤချဉ်းကပ်မှုဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ချက်များကိုမျှဝေခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားစဉ်ဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 47
ဒါကြောင့်သင်ဟာသင်ဘယ်လောက်လေးစားပါစေလူအချို့ကသဘောမတူနိုင်ဘဲသင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုတောင်အကဲဖြတ်နိုင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်ဆာလုပ်ရမယ်။ ငါသိတယ်။ 🙂
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 49
ဒါကို segmentation လောက်ဆင်ဆာလုပ်တာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ :) '
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 59
ဤသည်အမှန်တကယ် post ကိုနှိုးဆွတဲ့အတွေးဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်လိုပါကကျွန်ုပ်မည်သို့အစစ်အမှန်ဖြစ်ရန်ဆန္ဒရှိပါသနည်း။ ကျွန်ုပ်နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်နေသူသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်သူကိုကျွန်ုပ်၏ရာထူးမှစိတ်ထိခိုက်မည်လား။ ငါအွန်လိုင်းလူမှုရေးပစ္စည်းပစ္စယမှာမကောင်းတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ငါပုံမှန်အစည်းအဝေးပေါ်တွင်ပုံမှန်မဟုတ် post ကိုလေ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမေကကျွန်တော့်ကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ဘာသာရေးခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ဝေးဝေးနေဖို့ပြောခဲ့တယ်။ လူအများစုအတွက်လူတို့တွင်အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ထင်မြင်ချက်များနှင့်အတင်းအဖျင်းများရှိသည်။ ရွှံ့ထဲ၌ရှိနေပုံရသည့်အငြင်းပွားမှုများမှာအတင်းအဖျင်းများနှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုလွှမ်းမိုးထားသည်။ ငါခေါင်းစဉ်တစ်ခုအပေါ်ငါ့စိတ်ခံစားမှုယုတ္တိအဖြစ်ဖုံးကွယ်ဖို့သဘောထားကိုရှိသည်။ လူအများစုကအတူတူပဲ။ အကြောင်းအရာတခုပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်၏ခံစားချက်များကို (နှင့်အခြားသူများလည်းအလားတူပြုနိုင်) ကိုစစ်ဆေးနိုင်မှသာကျွန်ုပ်သည်ထင်မြင်ချက်နှင့်အတင်းအဖျင်းများကိုရှောင်။ အကျိုးရှိရှိစကားပြောဆိုနိုင်သည်။ post ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောအတွေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Doug!
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 48
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ထိုအခါငါသဘောတူ ... ငါကွဲပြားခြားနားမှုကိုလေးစားခြင်းနှင့်အငြင်းအခုန်ကနေဝေးကိုရပ်တန့်ဖို့လုံလောက်တဲ့သတ္တိခဲ့ချင်ပါတယ် ဒီတိုင်းပြည်မှာငါနဲ့မတူ၊ ငါ့ကိုဆန့်ကျင်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆတခုရှိပုံရတယ်။
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 10, 20
(၁) လူသားများသည်မျိုးနွယ်စုဆိုင်ရာ၊ သူတို့ကအစဉ်အမြဲနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့်တောသို့သူတို့ကိုနှင်ထုတ်လေ့သောသူတို့ကိုမကြိုက်ဘူး။ ဒါကလူမှုမီဒီယာတွင်လည်းမှန်ကန်သည်။ နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းထောင်ပေါင်းများစွာသောအမြစ်တွယ်နေသောအပြုအမူများကိုမည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့်မှဖယ်ရှားပစ်မည်မဟုတ်ပါ။ လူမှုမီဒီယာလှုပ်ရှားမှုသည်လူသားများနှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုကိုမပြောင်းလဲစေပါ။ ၎င်းသည်လူသားများအတွက်နက်ရှိုင်းသောလူမျိုးစုလိုအပ်ချက်ကိုအွန်လိုင်းမှဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည့်နည်းလမ်းတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ဒါကဒုံးပျံလိုပြိုကျသွားတာပါ။ အသစ်မဟုတ်ပါ ၎င်းသည်အလွန်၊ အလွန်ဟောင်းသောအရာတစ်ခုခုကိုဖွင့်နိုင်သည်။
၂။ ဒီကနေ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်ဟုခေါ်မည့်အစားအနာဂတ်သမိုင်းပညာရှင်များသည် ၁၉၉၅ မှ ၂၀၃၀ နှစ်များကို 'မူးယစ်ဆေးဝါဒခေတ်' ဟုရည်ညွှန်းလိမ့်မည်ဟုမကြာသေးမီကစဉ်းစားမိသည်။ ငါအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဝဘ်နှင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာများသည်ပြောင်းလဲမှု၏မောင်းနှင်အားများမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတို့သည်လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်လူစုများထင်မြင်ယူဆချက်များကိုဖွင့်ပြပေးနိုင်သည့်မီဒီယာများသာဖြစ်သည်။ ဒီအစောပိုင်းဒီဂျစ်တယ်ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နက်ရှိုင်း။ ရေရှည်တည်တံ့သောလူမှုရေးပြောင်းလဲမှုကိုအမှန်တကယ်မောင်းနှင်မည့်အစား၊ “ ၁၅ မိနစ်ကျော်ကြားမှု” ဟူသောစကားပုံကိုလူတိုင်းအတွက်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုယေဘူယျအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ယခင်ကရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကဲ့သို့ဆိုရှယ်မီဒီယာသည်လက်ရှိတွင်ကျော်ကြားသောသူတို့၏ရုပ်ပုံများ (ဥပမာ - Donald Trump) နှင့်ပါးစပ်၊ ကီးဘုတ်ရှိသူအားလုံး၏အတွေးအမြင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းအတွက်အလတ်စားဖြစ်လာသည်။ အေးဂျင့် ', ဒါမှမဟုတ်' တိုးတက်မှုနှုန်းဟက်ကာ '။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် buzzword အသစ်များကိုတီထွင်သည့်အစဉ်အမြဲကစားနေပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်စုံတစ်ရာသောအတွေးအခေါ်အသစ်များရှိကြောင်းပြသရန် (ထပ်မံ၍ တိုးတက်မှုဟက်ကင်း) နှင့်အတွေးခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်ချီးကျူးသင့်ကြောင်းဖော်ပြရန်။ ငါတို့သည်လည်း 'ပါရမီ', 'အတွေးခေါင်းဆောင်', 'ဂုရု' နှင့်အခြားသူများကဲ့သို့သောစကားလုံးများကိုစျေးပေါပါတယ်။ LinkedIn ရှိအခြားပုဂ္ဂိုလ်များသည်သူ / သူမ၏မိသားစု၏ပန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပြုပြင်မွမ်းမံပြီး SEO လှေကားထစ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်သော်လည်း LinkedIn ရှိလူတစ် ဦး သည်အထက်ဖော်ပြပါတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုနေသည်။ ယခုအချိန်တွင်နှိမ့်ချမှုနှင့်ကျင့် ၀ တ်များသည်အများအားဖြင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုများရှိသော်လည်းကျော်ကြားမှုနှင့်ပင်ကိုစရိုက်မှာထိုနေ့၏ငွေကြေးဖြစ်သည်။ ငါ 'ပေါက်ကွဲသံကြီး' ကြီးထွားလာသည်နှင့်တပြိုင်နက်ခေတ်သစ်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်၊ သို့သော်ထိုအချိန်အထိယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်၏ရည်မှန်းချက်အောင်မြင်ရန်သင့်ကိုမည်သို့အသုံးပြုနိုင်မည်ကိုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
အကြှနျုပျ၏ $ 0.02
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 51
စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု။ ဒါပေမယ့်ငါထပ်ပြောချင်တာကတော့မကြာခဏကြားရသူတွေကိုစွန့်ခွာပြီးလူသားတွေကိုတိုးတက်စေတဲ့ 'narcissists' လို့ခေါ်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သာလျှင်နွားများ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာဖြစ်လျှင်သင်သည်ပြproblemနာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 13
သင်ဤ post တွင်သင့်အား SM Experts နှင့်ငြင်းခုံနေပုံရသည်။ ဒီလိုမျိုးအချက်ကသက်သေပြနေတယ်မဟုတ်လား။
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 49
သူ Mike Poynton
ငါ Barry Feldman နဲ့အတူပါ “ …လူတချို့ကိုသင်ပိတ်လိုက်သောအခါလူအချို့ကိုဖွင့်လိုက်သည်။ ” ကျွန်ုပ်၏ထင်မြင်ယူဆချက်များသည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏လူမှုရေးလမ်းကြောင်းများမှမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏အမြင်ကိုမဆိုအမြဲတမ်းထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အမြင်ကိုမတူညီတဲ့ရှေးရှေးတွေကိုခေါ်ရတာကျွန်တော်ပျော်တယ်။ သို့သော်လည်းငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုများတွင်ပါ ၀ င်ရန်ကြောက်လန့်ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောကစားသမားအချို့ရှိကြောင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်သဘောတူပါသည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကိုတောင်သဘောတူကြပေမဲ့ရှာတွေ့မှာကိုကြောက်သောကြောင့်“ like” ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ငါကသူတို့ထဲကတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး ငါတုန်လှုပ်ချောက်ချားကလူနှင့်အမှတ်တံဆိပ်ကြိုက်တယ်။
Bonnie Harris က
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 32
ငါထင်တာကတော့တချို့လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုတခြားသူတွေကိုသူတို့သဘောမတူဘူးဆိုရင်မဆုံးဖြတ်ဘဲထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ သူက“ သူယုံကြည်တဲ့လူထုံတွေ” ကိုတွစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲဒီ့လူတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ငါတကယ်လေးစားမိတဲ့တစ်ခြားသူတစ်ယောက်နောက်ကိုလိုက်ခြင်းကိုရပ်လိုက်သည်။ အခြားသူများကတူညီသောအချက်အလက်များမှကွဲပြားခြားနားသောနိဂုံးချုပ်ကောက်ချက်ချနိုင်သည်ကိုလေးစားနေတုန်းမှာကျွန်ုပ်တို့သည်သဘောမတူနိုင်သည်ကိုလောကသည်မေ့လျော့နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
20:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 12
29:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 1, 37
ငါနှင့်အတူရုန်းကန်နေရသောအရာတစ်ခုမှာစာနယ်ဇင်းများနှင့်နိုင်ငံရေးသမားများသည်ရပ်တည်ရန်ငွေပေးချေခြင်းဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအကြောင်းတစ်ခါမှမကြားဖူးဘူး
30:2015 pm တွင်ဇူလိုင်လ 2, 25
တကယ်မှန်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ချေးငွေများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်များနှင့်အလားအလာအချို့ဆုံးရှုံးသွားသည်။ ဒါပေမယ့်ငါအမြင်မတူတဲ့ရှုထောင့်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာလေးစားတဲ့ရှေးရှေးတွေနဲ့ပိုလုပ်ချင်တယ်။ ဒါဟာခက်ခဲတဲ့ရွေးချယ်မှုပါပဲ။